DHEGEYSO-Wasiirka arrimahan gudaha oo Galgaduud beelo kuheshiisiinaya. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Wasiirka arrimahan gudaha oo Galgaduud beelo kuheshiisiinaya.
Agoosto 17, 2016 4:56 b 0
Cadaado, Aug 17 2016–Wasiirka Arimaha Gudaha DFS oo ku howlan xalinta Xiisado udhaxeeya Maleeshiyaad caraysan oo dhawaan isbaaro dhigtay Koontoroolka Deegaanka Godinlabe oo ku dhaw Magaalada Cadaado.
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Dowladda Somalia Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ayaa shalay soo gaaray Magaalada Cadaado waxaana uu kulamo la qaatay Waxgaradka Deegaanka Godin labe si loosoo afjaro Xiisada ka jirta Deegaankaasi.
Hadaba Dhacdooyinkaasi waxaa Radio Daljir uga waramay Taliyaha Saldhiga Degmada Cadaado ee Maamulka Galmudug Cali caga wayne, waxaana uu uwaramay Cumar Laki Man oo ku sugan Studiyaha Daljir ee Caabudwaaq.
Howlgalo ciidamo lagu qaqabtay oo laga sameeyey magaalada Garoowe.